प्रेममा किन हुन्छ धोका ? यी हुन् कारण ! – Jagaran Nepal
प्रेममा किन हुन्छ धोका ? यी हुन् कारण !
अक्सर धेरैको जीवन प्रेम र ब्रेकअपको गोलचक्करमा घुमिरहेको हुन्छ । यो नव-यौवना जोडीको मात्र कुरा होइन, पति-पत्नीबीच पनि यस्तो हुन्छ । विवाहित वा एकसाथ बसेको छ भन्दैमा उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भन्ने छैन । एकसाथ बसेपनि दम्पतीबीच मनमुटाव, झैझगडा, आपसी असमझदारी भइरहेको हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ बदलाको भावनाले पनि ‘धोका’ लाई जन्माउँछ । आफूलाई विगतमा कुनै प्रकारको हानी पुर्‍याएको व्यक्तिलाई बदला लिन खोज्नु मानवीय प्रवृत्ति नै हो । यस्तो अवस्थामा आफ्नो अहंकार सन्तुष्ट पार्नका लागि उसले धोकाको सहारा लिन्छ । उ आफ्नो प्रेमी/प्रेमिकासामु यो सावित गर्न चाहन्छ कि उसलाई चाहनेहरुको यो संसारमा कमि छैन ।